नेपाललाई बंगालादेश जस्तै टु’क्राउने ध’म्कि; अब कि आ’त्मह’त्या गर्छु कि ल’ड्छु – सरिता गिरि – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/नेपाललाई बंगालादेश जस्तै टु’क्राउने ध’म्कि; अब कि आ’त्मह’त्या गर्छु कि ल’ड्छु – सरिता गिरि
समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले जा’तीय भावनामा राष्ट्रियताको कुरा ल्याएर असहमत पक्षलाई आ’क्रमण गरिएको बताएकी छिन्। प्रतिनिधि सभा बैठकले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव अ’स्वीकार गरेपछि बाहिरिएकी गिरीले आफूले संशोधन राखेपछि धेरै फोहोरो गा’लीग’लौज सामना गरेको बताइन्। ‘म महिलाको रूपमा बोल्दैछु – या त मैले आ,त्मह,त्या गर्नुपर्छ वा जं’गको मैदानमा जानुपर्छ भन्ने भयो। महिलाले आफ्नो डि’ग्निटी र से’ल्फ रेस्पेक्टको र,क्षा गर्नुपर्छ भनेर म लागेको हुँ,’उनले भनिन्।
उनले थप भनिन्, ‘राष्ट्रियताको नाममा एक जना महिला सांसदको नाममा भएको व्य,वहार चेक गर्नु भएन भने नबिर्सनुस् बंगलादेशको निर्माण कसरी भयो’, गिरीले भने, ‘किनभने त्यहाँ पा,किस्तानी सेनाले महिलालाई बला,त्कार गर्‍यो। महिलाहरूले निर्माण गर्नुभयो।’ उनले जा’तीय भावनामा राष्ट्रियता ल्याएर अ’सहमत पक्षलाई आ,क्रमण भएको बताइन्।
जब जा’तीय भावनामा राष्ट्रियता ल्याएर असहमत पक्षलाई आ,क्रमण गरिन्छ। त्यसमा हामी बेलमै सचेत भएन भनौं। यसको परिणाम मुलुकको राष्ट्रिय एकताका लागि र राष्ट्रियताका लागि हुँदैन’, गिरीले भनिन्।
को हुन् सरिता गिरि??
सरिता गिरिको जन्म भारतको बिहार राज्यको हाजिपुर सोनपुर जिल्लामा सन् १९६१मा भएको हो! उनको विवाह २०३६ सालमा नेपाली नागरिक लक्ष्मण गिरि संग भएको हो! उनका ३ सन्तान छन् ! उनको पतिको मृ त्यु यस अघि नै भईसकेको छ! आफ्नो बाल्यकाल भारतको विहारमा बिताएकी सरिताले राजनीति शास्त्रमा एम.ए गरेकी छन् ! नेपाली नागरिक संग बिहे गरेर नेपाली नागरिक बनेकी सरिता पटक पटक सांसद बन्दै बाबुराम भट्टराईको मन्त्रीमंडलमा श्रम मन्त्री समेत बनेकी थिईन !
श्रम विभागका तत्कालिन महानिर्देशक सरुवा प्रकरणमा बि वादमा मुछिएकी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री सरिता गिरीलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पद मुक्त गरेका थिए । महानिर्देशक भट्टराईले नयाँ मेनपावर कम्पनी दर्ता गर्न नमानेपछि गिरीले सरुवा गरेकी आ रोप थियो। प्रधानमन्त्री भट्टराईले महानिर्देशकको सरुवालाई लिएर गिरीसँग स्पष्टिकरण समेत सोधेका थिए । पटक पटक नेपाली राजनीतिमा वि वादमा आईरहने सरिता गिरिको सांसद पद खोस्न पर्ने आवाज पनि यतिबेला उठिरहेको छ!
दुर्घटना अघि सेल्फी लिए, अनि सदाका लागि अस्ताए यी जनप्रतिनिधि